Ikhaya Uchungechunge LwesabekayoUchungechunge LokusakazaI-Amazon (uchungechunge) 'Anansi Boys' kaNeil Gaiman ekuThuthukisweni njenge-Series e-Amazon
I-Amazon (uchungechunge)Izindaba Zokuzijabulisa EzesabekayoUchungechunge LwesabekayoUchungechunge Lokusakaza
Amazon unikeze ukukhanya okuluhlaza ochungechungeni olwenziwe inoveli yokugoba uhlobo lukaNeil Gaiman U-Anansi Boys. Umbhali ubhala lolu chungechunge nomhlekisi odumile waseBrithani nomlingisi uSir Lenny Henry.
U-Anansi Boys aqala ukushaya amashalofu ezincwadi emuva ngo-2005 futhi abonisa umlingisi, uMnu. Gods American. Amazwibela enoveli afundeka kanjena:
Impilo ejwayelekile kaFat Charlie Nancy yaphela ngesikhathi uyise ewa eshona esigabeni se-Florida karaoke. UCharlie wayengazi ukuthi ubaba wakhe wayengunkulunkulu. Futhi wayengazi ukuthi unomfowabo. Manje ubhuti Spider usemnyango wakhe-esezokwenza impilo kaFat Charlie ithakazelise. . . futhi kuyingozi kakhulu.
Ukulungiswa kochungechunge olusha kuza njengengxenye yesivumelwano esiphelele uGaiman asifaka ku-Amazon Studios eminyakeni eminingana eyedlule nayo eyabona ukuguqulwa kwe namabika okuhle, inoveli ayibhale nomngani nomeluleki wakhe uTerry Pratchett. Isizini yesibili ye- namabika okuhle kusanda kumenyezelwa i-Amazon, futhi.
Umbhali uthathe ku-Twitter ukumemezela uchungechunge oluzayo nokwabelana ngomklamo osemthethweni ongawubona ngezansi.
Ngaphezu kwalokho, umbhali uxhumene nokuthunyelwe kubhulogi lapho abelane khona "Yonke imininingwane engingayiveza ngayo U-Anansi Boys. "
Okuthunyelwe, okungafundwa ngokugcwele lapha, imininingwane yokubhalwa kwale noveli nokuthi uHenry naye wabamba iqhaza kanjani ekusungulweni kwayo eminyakeni engaphezu kwengu-20 edlule. Uphinde wanikeza umkhondo wokusakaza, yize engekho amagama asemthethweni akhishiwe.
Ngizokunikeza umkhondo owodwa: elinye lamalungu ethu alingisayo belisemcimbini womphakathi nami ngesikhathi esithile eminyakeni emihlanu edlule. Into yokuqala ayisho lapho sihlangana ngemuva kwesiteji ukuthi incwadi yakhe ayithandayo kwakuyi-audiobook ka U-Anansi Boys, ifundwe nguLenny Henry. Futhi lapho ngimtshela ukuthi kunengxenye encwadini engangiyibhalile ekuqaleni ngicabanga ngaye, wajabula kakhulu. Ngakho-ke lapho kwenzeka, waba ngumuntu wokuqala engambuza, futhi waba ngowokuqala ukuvuma.
iHorror izokugcina uthunyelwe kuzo zonke izindaba zakamuva ze U-Anansi Boys njengoba itholakala.
Ingabe ungumlandeli wenoveli kaGaiman? Sazise ukuthi ucabangani kumazwana!
Ama-Amazon StudiosU-Anansi BoysULenny HenryNeil GaimanWaylon Jordan
Okukhulu eJapane! 'I-Psycho Goreman' Ithola Ubuciko obuvela kuTatsuki Fujimoto, 'Chainsawman' Manga Author